Waxyaabaha muhiimka ah markaad kombutar soo iibsaneyso | Somaliska
Waxaad ku fikireysaa in aad kombutar cusub soo iibsato. Hadaba maxaa muhiim ah oo ay tahay in aad ka fikirto inta aadan lacagtaada bixin? mowduucaan ayaan ku eegeynaa dhowr qodob oo ay muhiim tahay in aad ka fikirto. 1. Ma laptop mise (Desktop) midka guriga la dhigto. Haddii aad tahay qof banaanka u badan oo safarkiisa badan yahay ama ka shaqeeya meel dibada ah, waxaa haboon in aad soo iibsato Laptop adigoo si fiican uga fikiraya awooda beteriga ee laptopka. Haddii aad u isticmaaleysa guriga ama xafiiska oo aadan ku fikireyn in aad dibata u qaadato, waxaa haboon Desktop ee ah kan guriga la dhigto. Hadaba ka fikir goobta loo istimcaalayo kombutarka ka dibna go’aan ka gaar. 2. Ujeedada loo isticmaalyo kombutarka. Ka dib markaad go’aansatey in aad iibsato Laptop ama Desktop. Qodobkaan waa muhiim waayo kombutaradu way kala awood badan yihiin waana kala u jeedo duwan yihiin. Ka fikir waxyaabaha aad qorsheynaysid in aad u isticmaasho kombutarka , ciyaaro miyaad ku dheelaysaa? ma internekta iyo qoraalo uum baad ku isticmaalaysaa? Haddii aad kombutarkaaga dooneysa in uu awood wayn yeesho oo aad waxyaabo culus u isticmaalayso ogow in qiimihiisu uu sareynayo. 3. Qiimaha: Ka dib markii aad ka fikirtay ujeedada aad u isticmaaleysa kombutarka, waxaa muhiim ah in aad ka fikirto meeqa ayaa diyaar la tahay in aad bixiso. Haddii jeebkaaga furan yahay wax dhibaato ma leh qiimaha oo ujeedkaaga iyo qiimaha way is waafaqayaan balse haddii jeebkaaga gaaban yahay ogow in ay macquul tahay in kombutarka aad soo gadato laga yaabo in uusan dhamaan ujeedkaaga awood u lahayn. 4. Awooda Kombutarka: Ka dibmarkii aad sadexda qodob ee aan kor ku soo sheegnay aad cadeyso, ayay imaanyesaa in aad ka fikirto awooda kombutarkaaga. qodobka ugu muhiimsan ee aad ka fikireysa waa waxa loo yaqaan RAMKa (ama qeybta xasuusta) kombutarada cusub ee hada socda kuwa ugu yar waxaad ka helaysaa 2GB ram taasoo iska okey ah balse aan top ahayn. Ayadoo ku xiran ujeedada aad kombutarka u isticmaaleyso iyo qiimaha aad awoodo fiiro gaar ah u yeelo RAMKa . Kombutarba midkuu ka RAM badanyahay waa ka dhaqsi badanyahay. Sidoo kale waxaad fiiro gaar ah u yeelataa waxa loo yaqaan CPU (maskaxda). Walow aysan sidaas u muhiim u ahayn tirada ay ku qoraan CPU balse iska fiiri shirkada sameysay tusaale ahaan shirkadaha sameeya CPUda waxaa ugu caansan Intel iyo AMD. labadaas waxaa CPU fiican Intel. HardDiskiga iska fiiri sidoo kale walow waqtiga hada la joogo ay inta badan komburada la socdaan HardDisk aad u qaad wayn oo gaareysa 320GB iyo wixi la mid ah taasoo ay adagtahay in aad buuxiso. Qalad badan oo ay dadka sameeyaan ayaa ah in ay kombutarka ka eegaan HardDiskiga ayagoo u maleeya tirada badan in ay dhaqsida kombutarka u fiicantahay. Balse HardDiskiga waa weel wax lagu shubo oo keliya. Dhaqsida kombutarka waxaa muhiim u ah RAMka iyo CPU. Sidoo kale waxaad iska fiirisaa shirkada sameysay kombutarka, shirkadaha way kala garanti fiicanyihiin oo way kala kombutar wanaagsan yihiin. Shirkadaha ugu caansan waxaa ka mid ah HP, DELL, Acer, Toshiba iyo kuwa kale oo fara badan. Komburada cusub ee hada socda waxaa ku jira barnaamijka lagu magacaabo Windows 7 kaasoo aan dhihi karo waa kii ugu fiicnaa ee ay soo saarto shirkada Microsoft. Iska hubi nuuca barnaamijka ku jira kombutarka. 5. Gaarantiiga: Qodobkaan aad ayuu muhiim u yahay, komburada cusub oo dhan waxay leeyihiin garanti gaaraya 1 sano ama 2 sano. Hadaba iska eeg oo wax ka waydii meesha aad ka soo gadanayso garantiga inta sano uu yahay iyo waxyaabaha ay daboolayaan. La soco inta badan Garantiiga ma daboolo ciladaha aad kombutarka adiga gaarsiiso sida in uu shaah kaaga daato. Mowduucyo la xiriira teknolojiyada oo kan la mid ah waxaad kala socon kartaa bogeena kale ee http://www.casriga.com
Waxyaabaha muhiimka ah markaad kombutar soo iibsaneyso
Waxaad ku fikireysaa in aad kombutar cusub soo iibsato. Hadaba maxaa muhiim ah oo ay tahay in aad ka fikirto inta aadan lacagtaada bixin? mowduucaan ayaan ku eegeynaa dhowr qodob oo ay muhiim tahay in aad ka fikirto.
1. Ma laptop mise (Desktop) midka guriga la dhigto.
Haddii aad tahay qof banaanka u badan oo safarkiisa badan yahay ama ka shaqeeya meel dibada ah, waxaa haboon in aad soo iibsato Laptop adigoo si fiican uga fikiraya awooda beteriga ee laptopka.
Haddii aad u isticmaaleysa guriga ama xafiiska oo aadan ku fikireyn in aad dibata u qaadato, waxaa haboon Desktop ee ah kan guriga la dhigto. Hadaba ka fikir goobta loo istimcaalayo kombutarka ka dibna go’aan ka gaar.
2. Ujeedada loo isticmaalyo kombutarka.
Ka dib markaad go’aansatey in aad iibsato Laptop ama Desktop. Qodobkaan waa muhiim waayo kombutaradu way kala awood badan yihiin waana kala u jeedo duwan yihiin. Ka fikir waxyaabaha aad qorsheynaysid in aad u isticmaasho kombutarka , ciyaaro miyaad ku dheelaysaa? ma internekta iyo qoraalo uum baad ku isticmaalaysaa?
Haddii aad kombutarkaaga dooneysa in uu awood wayn yeesho oo aad waxyaabo culus u isticmaalayso ogow in qiimihiisu uu sareynayo.
3. Qiimaha: Ka dib markii aad ka fikirtay ujeedada aad u isticmaaleysa kombutarka, waxaa muhiim ah in aad ka fikirto meeqa ayaa diyaar la tahay in aad bixiso. Haddii jeebkaaga furan yahay wax dhibaato ma leh qiimaha oo ujeedkaaga iyo qiimaha way is waafaqayaan balse haddii jeebkaaga gaaban yahay ogow in ay macquul tahay in kombutarka aad soo gadato laga yaabo in uusan dhamaan ujeedkaaga awood u lahayn.
4. Awooda Kombutarka: Ka dibmarkii aad sadexda qodob ee aan kor ku soo sheegnay aad cadeyso, ayay imaanyesaa in aad ka fikirto awooda kombutarkaaga. qodobka ugu muhiimsan ee aad ka fikireysa waa waxa loo yaqaan RAMKa (ama qeybta xasuusta) kombutarada cusub ee hada socda kuwa ugu yar waxaad ka helaysaa 2GB ram taasoo iska okey ah balse aan top ahayn.
Ayadoo ku xiran ujeedada aad kombutarka u isticmaaleyso iyo qiimaha aad awoodo fiiro gaar ah u yeelo RAMKa . Kombutarba midkuu ka RAM badanyahay waa ka dhaqsi badanyahay.
Sidoo kale waxaad fiiro gaar ah u yeelataa waxa loo yaqaan CPU (maskaxda). Walow aysan sidaas u muhiim u ahayn tirada ay ku qoraan CPU balse iska fiiri shirkada sameysay tusaale ahaan shirkadaha sameeya CPUda waxaa ugu caansan Intel iyo AMD. labadaas waxaa CPU fiican Intel.
HardDiskiga iska fiiri sidoo kale walow waqtiga hada la joogo ay inta badan komburada la socdaan HardDisk aad u qaad wayn oo gaareysa 320GB iyo wixi la mid ah taasoo ay adagtahay in aad buuxiso. Qalad badan oo ay dadka sameeyaan ayaa ah in ay kombutarka ka eegaan HardDiskiga ayagoo u maleeya tirada badan in ay dhaqsida kombutarka u fiicantahay. Balse HardDiskiga waa weel wax lagu shubo oo keliya. Dhaqsida kombutarka waxaa muhiim u ah RAMka iyo CPU.
Sidoo kale waxaad iska fiirisaa shirkada sameysay kombutarka, shirkadaha way kala garanti fiicanyihiin oo way kala kombutar wanaagsan yihiin. Shirkadaha ugu caansan waxaa ka mid ah HP, DELL, Acer, Toshiba iyo kuwa kale oo fara badan.
Komburada cusub ee hada socda waxaa ku jira barnaamijka lagu magacaabo Windows 7 kaasoo aan dhihi karo waa kii ugu fiicnaa ee ay soo saarto shirkada Microsoft. Iska hubi nuuca barnaamijka ku jira kombutarka.
5. Gaarantiiga: Qodobkaan aad ayuu muhiim u yahay, komburada cusub oo dhan waxay leeyihiin garanti gaaraya 1 sano ama 2 sano. Hadaba iska eeg oo wax ka waydii meesha aad ka soo gadanayso garantiga inta sano uu yahay iyo waxyaabaha ay daboolayaan. La soco inta badan Garantiiga ma daboolo ciladaha aad kombutarka adiga gaarsiiso sida in uu shaah kaaga daato.